Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye, nguJohn Green, inoveli yokuxabisa ubomi. | Uncwadi lwangoku
Ngaphantsi kweNkwenkwezi enye, nguJonh Green.
Nanku umsebenzi oshukumisayo, oshukumisayo nobuntu. Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye ubalisa ngamava kaHazel Grace Lancaster, oneminyaka elishumi elinesithandathu ofikisayo onesifo somhlaza iminyaka emithathu.. Ngexesha lokubaliswa kweziganeko, esi sifo sikwinqanaba IV, ke sele sinwenwele kwimiphunga yomntu ophambili. Ukulwa nefuthe le-metastasis, oogqirha bagqibe kwelokuba bavavanye iyeza lokulinga kuye.
Izindululo zonyango zibandakanya ukulala ixesha elide. Xa uHazel engalali, uzonwabisa ngokufunda incwadi ayithandayo Uxinzelelo lwasebukhosini. Amaxesha ngamaxesha intombazana iya kwiqela lokuxhasa abantu abancinci abanomhlaza apho adibana khona noGus, ahamba naye kuhambo oluyingozi (ngenxa yeemeko zempilo) kunye nokuvula iintliziyo zabo nokuba zithini na iimeko. Kulomsebenzi umfundi uyabandakanyeka kweli bali lobutsha, uthando olubuhlungu kunye oluhle, ngomyalezo ocacileyo wokuxabisa ubomi kunye nabantu abakhoyo kuwo.
1.3 Yintoni eyamkhokelela ekubeni abe ngumbhali
1.4 Inoveli ethengiswa kakhulu ngo-2012
1.5 UJohn Green kwiYouTube
1.6 Umbhali kunye nebhola ekhatywayo
2 Ukuphuhliswa kwesiqwenga sencwadi phantsi kweNkwenkwezi enye
2.1 Unyango olutshintshe ubomi bakhe
2.2 Incwadana enabantu bokwenene
2.4 Umyalezo wencwadi ekufuneka uyibonile
UJohn Michael Green wazalelwa e-Indianapolis, eIndiana, eUnited States, ngo-Agasti 24, 1977. Ungunyana omkhulu kaMike noSydney Green, umninawa wakhe ogama linguWilliam Henry Hank Green II. Kwiminyaka embalwa yokuqala yena kunye nosapho bahlala eMichigan, emva koko yiAlabama, kwaye ekugqibeleni iOrlando, eFlorida.
Waya kwisikolo samabanga aphakamileyo iLake Highland eOrlando. Waphumelela ngo-2000 kwiKholeon yaseKenyon kunye nokuphindwe kabini kwisiNgesi nakwiZifundo zeNkolo. UJohn oselula wayefuna ukuba ngumfundisi, kodwa emva kokusebenza njengomfundi kwisibhedlele sabantwana eColumbus, eOhio, wagqiba ekubeni abe ngumbhali.
Yintoni eyamkhokelela ekubeni abe ngumbhali
Umsebenzi wakhe wokukhathalela iintsana ezinezifo ezisongela ubomi zamkhuthaza kwimisebenzi yakhe. Iincwadi zakhe zibandakanya: Ukukhangela iAlaska (2005) kunye Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye (2012); Le yokugqibela yeyona noveli yakhe yamkelwe kakhulu, ukuthandwa kwayo kukhokelele kwiscreen esikhulu (2014). Isigqibo sakhe sokuba ngumbhali sixhaswe yimpumelelo yakhe, hayi ilize iGreen iphakathi Ababhali abangama-20 abahlawulwa kakhulu ngonyaka ka-2014.
Inoveli ethengiswa kakhulu ngo-2012
Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye ifikelele kwi- # 1 kuluhlu oluthengisa kakhulu epapashwe yi ENew York Times ngoJanuwari ka-2012 (igama eliyintsusa lenoveli yesiNgesi ngu Umonakalo kwiinkwenkwezi zethu). Inyaniso, Le noveli iphakathi kweencwadi ezingama-20 ezithengiswa kakhulu ngekhulu lama-XNUMX. Eminye imisebenzi eyaziwayo yombhali yile Intabalala yeKatherinas (2006) Mayibe likhephu: Iintsuku ezintathu zeholide (njengombhali-mbhali) kunye Iidolophu zephepha (2008).
UJohn Green kwiYouTube
Ngokufanayo, Ngo-2007 umbhali waqala i-YouTube VlogBrothers, kunye nomntakwabo, bagxila kuthotho lwemfundo. Kwiminyaka elishumi kamva, le akhawunti sele inababhalisi abangaphezu kwezigidi ezi-3 kunye neembono ezizigidi ezingama-700. Okwangoku unabantwana ababini, uHenri noAlice, imveliso yomtshato wakhe noSara Urist.
Umbhali kunye nebhola ekhatywayo
Uyayithanda ibhola ekhatywayo; Umxhasi othembekileyo weLiverpool FC kunye nomnini we-Wimbledon FC Kwisahlulo sesithathu saseNgilani. UJohn Green kwafunyaniswa ukuba unesifo esinganyanzelekanga sokunyanzelwa. Unike uluvo lwakhe kwaye waxoxa ngokubanzi ngesi sifo kwisitishi sakhe se-YouTube ukuze axelele uluntu ngokubanzi kwaye anike inkxaso kwabanye abachaphazelekayo.
Ukuphuhliswa kwesiqwenga sencwadi phantsi kweNkwenkwezi enye
Unyango olutshintshe ubomi bakhe
Emva kokuphathwa ngumhlaza iminyaka emithathu, umntu ophambili oneminyaka eli-16 unyanzelekile ukuba aye kwiqela lonyango kunye nenkxaso yabantu abaphethwe sesi sifo. UHazel Grace Lancaster wamkela ngokungathandabuzi ukwalathiswa ngumama wakhe.
Ngelixa leqela lokunyanga udibana no-Augustus 'Gus' Waters oneminyaka eli-17 ubudala, oxolelweyo emva kokuba enqunyulwe umlenze ngenxa yethumba elibi.
Inzondelelo kaGus kunye ne-charisma ebomini inomdla kakhulu kuHazel. Ngokucacileyo unomdla kuye, kwaye bobabini ngokungathandabuzekiyo bathandana, ngaphandle kokwazi ukuba yonke into izophela kabuhlungu, Nangona kunjalo, bayithatha imbali yabo. Nangona ubudlelwane babugwetyiwe kwasekuqaleni, uGus uyakwazi ukuthanda uHazel.
Umfundisa indlela "yanaphakade eneentsuku ezibaliwe", atshintsha ngayo isimo sakhe sengqondo ngobomi. Bobabini bathathe isigqibo sokuya eAmsterdam ukuya kudibana nombhali wencwadi abayithandayo, Uxinzelelo lwasebukhosini. Apho ubudlelwane babo buyachuma kwaye bafunda ukuba ubomi budla ngokuba nzima ukumelana nomhlaza okanye awunamhlaza.
Incwadana enabantu bokwenene
Into engaqhelekanga kule noveli kukuqheleka kwabalinganiswa bayo, akukho nokubaxiweyo. Abalinganiswa abaphambili bayayithanda imidlalo yevidiyo enogonyamelo, kunye neencwadi okanye iimuvi ezizele yimifanekiso ekrwada, enabantu abakhubazekileyo kunye nemizimba ebuthathaka. Ngamanye amaxesha batya ukutya kunye nokusela. Kuba uHazel noGus bayathandana, uGreen uchaza ngokufutshane xa besenza uthando (ngokukhuselekileyo).
UHazel noGus bayakuqonda ukuba kuthetha ntoni ukuthatha uxanduva kwezigqibo ezicel'umngeni kunye nezixhonyiweyo abazenzileyo. Kule meko, umfundi uyachukunyiswa yile mibongo, ukrelekrele, ukuhlekisa kwaye ugcwele ibali lothando, nokuba kuyacaca ukuba alikho ithuba lokuba nesiphelo esihle.
Ngalo msebenzi, uJohn Green wophula intliziyo yomfundi kumaxesha amaninzi, ukuvelisa iinyembezi kunye noncumo ngaxeshanye ngenxa yemvakalelo kaHazel yokulangazelela ubomi 'ixesha elilinganiselweyo'. Unyanzelekile ukuba aqole esemncinci, nangona engekabikho nakwishumi elivisayo.
Kwangokunjalo, umbhali ushiya ukubonakaliswa okubonakalayo kwixabiso lomzuzu ngamnye kunye nokuphila ngoku. Nangona kunjalo, abafundi abanobuthathaka banokungonwabi ngengxoxo yombhali, njengoko ingxelo ibandakanya inkcazo yemifanekiso yobomi bemihla ngemihla bomntu onomhlaza.
UHazel unamava okusondela ekufeni abangela uxinzelelo olukhulu kunye nengxoxo phakathi koogqirha kunye nosapho kunyango lwakhe. Kwesinye isihlandlo, ubukele uGus ngelixa egabha ngokunyanzelwa; Kwaye apho kuyaboniswa ukuba ukuxabisa umzuzwana ngamnye kunye akunakuthethathethwana. Ixesha elingaphezulu abalinganiswa baphulukana nolawulo lwamehlo abo, imilenze kunye nobuntu babo.
Umyalezo wencwadi ekufuneka uyibonile
Iimeko zikaHazel zibonisa ukuqiqa komntu ofayo nokuba kunjani ukuphulukana nomntu omthandayo. Nangona kunjalo, Elona cala linamandla kulo lonke iyelenqe sisigqibo somntu ophambili ekuthandeni nasekuthandweni, esazi intlungu anokuthi ayizise.
Akunakwenzeka ukuba ungaziva uvelwano kumntu onjalo okhaliphile kwaye onyanisekileyo. Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye Umsebenzi owahlukileyo kaJohn Green. Ngokuqinisekileyo, le yincwadi ekufuneka ibonwe, enye yezona zibalaseleyo kuhlobo lweenoveli zolutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ngaphantsi kwenkwenkwezi enye